Isbedelka Horumarka ee Waxsoosaarka saxarka ee Shirkadeena
Shirkaddayadu waxay ku sii kordheysay warshadaha wax soo saarka wax lagu nadiifiyo qashinka muddo 6 sano ah, intii lagu jiray horumarka weyn ayaa la sameeyay. Gaar ahaan, badeecadaha baakadaha ku habboon ee deegaanka u habboon iyo weelka miisaska u rogi kara ee bey'ada u habboon ayaa si ballaaran loo isticmaalay, laakiin weli waxaa jira xaddidaadyo badan oo ka jira ...
Soo-saarista Isku-darka guud ee wax-soo-saarka ayaa ka mid ah diyaarinta saxarka, wax-ka-qabashada, qallajinta, cadaadiska kulul iyo habab kale. 1. Diyaargarowga saxarka Xoqidda waxaa ka mid ah saddexda tallaabo ee alaabta ceeriin qodidda, xoqidda iyo xoqidda. Marka hore, fiber-ka aasaasiga ah waxaa lagu duugay masaxda ka dib baaritaanka iyo kala-saarista ...
Noocyada Baakadaha saxarka
Baakaduhu waxay maraan dhammaan nidaamka silsiladda sahayda laga soo qaado alaabta ceyriinka ah, soo iibsiga, wax soo saarka, iibka iyo isticmaalka, waxayna la xiriirtaa nolosha aadanaha. Iyada oo si joogto ah loo hirgalinayo siyaasadaha ilaalinta deegaanka iyo kor u qaadista ujeedooyinka ilaalinta deegaanka ee macaamiisha, ra'yi uruurinta ...
Sifooyinka sifudud sameynta horumarka Shiinaha
Marka loo eego xaaladda cusub ee Shiinaha, astaamaha horumarinta qashin-samaynta ee samaynta baakadaha warshadaha ayaa inta badan ah kuwa soo socda: (1) Saxarka samaynta suuqa waxsoosaarka baakadaha warshadaha ayaa si dhakhso leh u sameysmaya. Markii la gaadho 2002, alaabada baakadaha waraaqda-balaastigga ahi waxay noqdeen sumadda ugu weyn ee dalabka qaranka ...
Horumarinta tiknoolajiyadda sameynta saxarka ee Shiinaha
Horumarinta warshadaha wax taaj oo kale wax taaj oo kale ee Shiinaha ayaa taariikh ku dhow 20 sano. Warshadda wax soo saarka saxarada ee Hunan waxay maal gashatay in kabadan 10 milyan yuan sanadkii 1984 si ay usoo bandhigto nooca durbaanka Rotary ee waxsoosaarka saxarka tooska ah ee wax soo saarka ee ka yimaada Faransiiska, kaas oo inta badan loo isticmaalo wax soo saarka ukunta ukunta, taas oo ...
Xaaladda Horumarka ee Warshadaha Baakadaha Sirdoonka ee Shiinaha
Baakadaha caqliga leh waxaa loola jeedaa ku darista qalabka farsamada, korontada, elektarooniga iyo kiimikada iyo tiknoolajiyada kale ee cusub baakadaha iyada oo la adeegsanayo ikhtiraac, si markaa ay u leedahay shaqooyinka guud ee baakadaha iyo waxyaabo gaar ah oo gaar ah si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee badeecadaha. Waxay ku lug leedahay ...
Waqtigan xaadirka ah, Waxaa jira Dhibaatooyin dhowr ah oo gaar ah oo ku saabsan Horumarinta Tiknoolajiyada wax taaj oo kale
(1) Marka loo eego heerka tikniyoolajiyadeed ee jira, dhumucda alaabada saxarka duuban ayaa qiyaastii u dhexeysa 1 iyo 5mm, dhumucda alaabada guudna waa ilaa 1.5mm. (2) Marka loo eego tayada hadda jirta iyo adeegsiga alaabada wax lagu duubo ee saxarka ku duuban, culeyska xamuulka ugu badan ayaa kor u kici kara ...
Khaanadaha Baako Baako Baako Baako, Dhammaan Noocyada Kala Dheehista Duubista Mashiinka Xannibaadda, Sanduuqa Baakadaha Cuntada Degdega ah, Shaybaarka Saxarka Dyed, Sanduuqa Baakadaha Cuntada, Dheehista Duubista Saxarka Haya,